Vavaky ny ran'i Kristy. ? Ho an'ny ankizy sy fiarovana
9 Famakiana Min
Vavaky ny ran'i Kristy. Amin'ireo singa rehetra ananantsika ao amin'ny Eglizy Katolika, ny ra an'i Kristy dia iray amin'ireo mahery ary izany no antony misy vavaka amin'ny ran'i Kristy.
Io singa io izay mbola miaina mandraka ankehitriny, satria mbola eo an-tànana naratra i Jesoa Kristy tafatsangana. Ny finoantsika dia mitazona ny sarin'i Jesosy velona hatrany teo amin'ny hazo fijaliana izay ny rany mikatsaka ny fitiavan'olombelona.
Na inona na inona angatahintsika dia mino fa ny ra matanjaka mahery an'i Kristy dia manana hery ampy hanomezana antsika izay angatahintsika.
Ny vavaka dia azo atao na aiza na aiza ary ny ilaina fotsiny dia ny finoana fa nomena ilay fahagagana.
1 Mahery va ny vavaky ny ran'i Kristy?
1.1 Vavaky ny ran'i Kristy ho an'ny ankizy
1.2 Ny rà nataon'i Kristy ho an'ny raharaha sarotra
1.3 Ny vavaka amin'ny ràn'i Kristy handroaka ireo olana
1.4 Miaro amin'ny ran'i Kristy
1.5 Vavaka isan'andro
Mahery va ny vavaky ny ran'i Kristy?
Mahery ny vavaka rehetra amin'Andriamanitra.
Raha mivavaka amin'ny finoana ianao dia hanana izay rehetra tadiavinao.
Manàna finoana sy mino ny herin'i Jesosy Kristy Tompontsika.
Vavaky ny ran'i Kristy ho an'ny ankizy
Dada ô, tonga aho hangataka aminao ary mangataka aminao mba hihaino ny feoko, ory aho, mifona ka tsy miala amin'ny orinasa ratsy ny zanako ary tsy mianjera amin'ny fihinanana zava-mahadomelina, toaka, izy indray no tafiditra. sekoly, mangataka aminao amin'ny foko rehetra aho amin'ny herin'ny ran'i Jesosy Kristy Tompo, ataovy ho lehilahy tsara izy.
Ry Ray any an-danitra, manadio ny fanahin'ny zanakay lahy, manadio azy amin'ny ratsy, fankahalana, lolom-po, tahotra, alahelo, manirery, alahelo ary alahelo ... amin'ny alàlan'ny ranao, mangataka aminao izahay hanova azy ho lasa tia ny hafa , fifaliana, tony, tsara fanahy, tsy misy tahotra, izay mamindra fitiavana, tsy misy fahantrana, mamolavola ny fanahy miaro azy amin'ny ranao sarobidy.
Andriamanitra mamindra fo, ianao izay mahalala ny zava-drehetra, izay mahita ny zava-drehetra, manome fahendrena ho antsika satria raiamandreninay isika ary maniry ny ho tsara kokoa isika, ampio aho hahatakatra azy ireo, fantatsika hoe firy taona ianao ary rehefa miadana kokoa sy / na mpikomy.
Oh, ra nalatsaka ny ran'i Jesosy Kristy, nandatsaka an'i Jesosy, ny zanakay, ny ranao voatahy sy voadio, mba hanome hery azy izany.
Manontany anao amin'ny halalin'ny fiainako aho.
Azonao atao ny mivavaka ny vavaky ny Ran'i Kristy ho an'ny ankizy miaraka amin'ny zanakao.
Ireo ankizy manana zavatra mahafinaritra indrindra izay mety nanjo anay. izy ireo vokatry ny fitiavantsika ary raisinay eto amin'ity tontolo ity izy ireo dia feno fifaliana miaraka amin'ny finoana fa ny zava-drehetra dia hiasa ho azy ireo amin'ny fiainana.
Saingy misy fotoana, miaina amin'ny traikefa tsy mahafinaritra ary isika amin'ny maha-ra antsika, amin'ny maha-ra Kristy Lasa fanantenana tokana izahay.
Ny fangatahana ny zanakay dia fihetsika feno fitiavana azontsika atao.
Ny rà nataon'i Kristy ho an'ny raharaha sarotra
Ry ran'i Jesosy Kristy sambatra! Ry rà sy ranon'olombelona, ​​sasao, diovy aho, avelao aho, fenoy ny fanatrehanao; Manadio ny ra izay manome tanjaka, midera anao amin'ny fanatrehanao Eokaristia amin'ny Altar aho, mino ny herinao sy ny mamy aho, matoky anao aho mba hiaro ahy amin'ny ratsy rehetra ary mangataka anao amin'ny halalin'ny fahaizako aho: miditra ao amin'ny fanahiko ary Diovy izany, fenoy ny foko ary tohizo izany.
Ra mandriaka izay nalatsaka teo aminny Hazo Krofijaliana ary niroborobo tao aminny Fo Masin'i Jesoa, dia midera anao aho ary manolotra anao amin'ny fankalazako ny fiderana sy ny fitiavako, ary misaotra anao Tompon'ny Ra sy ny Fiainanao aho noho ny fisaorana an'ireo olona voavonjy ary nahazo fiarovana teo aloha Zavatra ratsy rehetra manodidina antsika.
Ry Jesoa, izay nanome ahy ilay fanomezana sarobidy ny Rao, sy tany Kalvary, tamim-pahasahiana sy fandeferana feno fahalalanao, dia nodiovinao aho tamin'ny tavy rehetra ary nandatsaka ny vidin'ny fanavotana ahy; Ry Kristy Jesosy, izay eo amin'ny alitara no fiainako, ampitao ny fiainako ianao, ianao no loharanon'ny fahalalàna fantatra rehetra, ary ny fanomezan-tsoa lehibe nomen'Andriamanitra ny zanany, dia ianao no fitsapana sy fampanantenam-pitiavana mandrakizay mandrakizay.
Ankasitrahako ny fotoana rehetra namonjena ahy sy niarovako tamina herinao sy ny herinao, izay manohana ahy amin'ny fahatokisan'ny fahatakarana tanteraka ny fahalemeko, ny malalako sy ny fahafahanao miaro ahy amin'ny ratsy manodidina ahy, ny litoran ’ny devoly izay mitafy antsika hatrany mihoatra ny hery sy ny fahazoantsika manao azy.
Misaotra anao amin'ny maha Ra Ra izay manafaka ny ainay amin'ny maizina sy ny fitaovan'ny faharatsiana izay matetika tonga hanimba anay.
Ny ran'i Kristy dia nitsimoka tamin'ny fotoana nanolorany ny fiainany ho an'ny fitiavan'olombelona ary ao anatin'izany ny herin'Andriamanitra dia mifantoka amin'ny hanomezana ireo fahagagana ilaintsika.
Mety ho fangatahana sarotra izy ireo. Fahagagana marina izay misy hery mahery noho ny hery tsy manam-petra ihany ary mety ho herin'ny Ràn'i Kristy.
Io vavaka io dia azo atao miaraka amin'ny fianakaviana na namana iray, ny zava-dehibe dia ny fahafantarantsika fa tokony hino isika, izany no manome antoka fa mahomby ny vavaka.
Ny vavaka amin'ny ràn'i Kristy handroaka ireo olana
Ny olana, amin'ny ankamaroan'ny tranga, mandao ao aminay ary manimba anao. Nandany alina tsy matory izahay mieritreritra fotsiny momba ny olana misy ary izany dia mitondra voka-dratsy ara-batana tena mahasosotra.
Ny fahafaha-mandroaka ireo olana ivelantsika, avy amin'ny tokantranontsika ary eny ivelan'ny havana akaiky aza dia hetsika ilaina ary amin'izany dia afaka manampy antsika ny herin'ny Ràn'i Kristy.
Mivavaha amin'ity fangatahana manokana ity ary minoa fa efa mandeha ny valin'ny Tompo.
Miaro amin'ny ran'i Kristy
Ry Jesosy Tompo, amin'ny Anaranao, ary amin'ny herin'ny Ra sarobidy dia asiana tombo-kase ny olona tsirairay, zava-misy na zava-mitranga izay tadiavin'ny fahavalo hamonoana anay.
Amin'ny herin'ny Ràn'i Jesosy no amehezantsika ny hery manimba rehetra eny amin'ny habakabaka, ambonin'ny tany, anaty rano, anaty afo, ambanin'ny tany, amin'ny herin'ny satana voajanahary, any amin'ny lavaka mangitsokin'ny helo, ary ao amin'ny el tontolo izay hifindrantsika anio.
Amin'ny herin'ny Ràn'i Jesosy dia manitsakitsaka ny fitsabahana rehetra sy ny asa ataon'ilay ratsy isika.
Mangataka an'i Jesôsy izahay mba handefa ny Virjiny Masina ho any an-trano sy toeram-piasana miaraka amin'i Saint Michael, Saint Gabriel, Saint Raphael ary ny kianjany rehetra ao Santos Angeles.
Amin'ny herin'ny Ràn'i Jesosy no manisy tombo-kase ny tranontsika, izay rehetra monina azy (miantso ny tsirairay amin'izy ireo), ny olona izay halefan'ny Tompo ho ao aminy, ary koa ny sakafo, ary ny entana izay ampitondrainy antsika amin-kalalahan-tanana. hanohana.
Miaraka amin'ny herin'ny Ràn'i Jesosy dia manisy tombo-kase ny tany, varavarana, varavarankely, zavatra, rindrina ary gorodona isika, ny rivotra mamofofofonay ary amin'ny finoana dia mametraka faribolana manodidina ny fianakaviantsika.
Miaraka amin'ny herin'ny Ràn'i Jesosy dia asio tombo-kase ny toerana halehantsika anio, ary ny olona, ​​orinasa na andrim-panjakana horesahantsika (manonona azy tsirairay avy).
Miaraka amin'ny herin'ny Ràn'i Jesosy dia manisy tombo-kase ny asantsika sy ny ara-panahy isika, ny orinasan'ny fianakaviantsika manontolo, ary ny fiara, làlana, rivotra, lalana ary izay mety ho fomba fitaterana izay hampiasainay.
Amin'ny rao sarobidinao no ametrahanay ny fihetsika, ny saina ary ny fon'ny mponina rehetra sy mpitarika ny Tanindrazantsika mba hanjakan'ny fiadananao sy ny fonao.
Misaotra anao Tompoko noho ny ra sy ny fiainanao ianao, satria fisaorana azy ireo dia voavonjy izahay ary voaro amin'ny ratsy rehetra.
Io vavaka fiarovan-tena amin'ny Ràn'i Kristy io dia matanjaka!
Afaka mangataka isika fa ny ràn'i Kristy mahery dia manarona antsika toy ny akanjo fiarovana amin'ny manodidina antsika ka tsy hikasika antsika ny ratsy. Na izahay na ny zanakay na ny fianakaviantsika sy ny namanay.
Araka ny nitranga tao amin'ny testamenta vaovao izay nandatsahan-dra teo am-baravaran'ny trano ho tandindon'ny fiarovana, toy izany koa amin'ny finoana ataontsika ankehitriny manontany izany ny ran'i Kristy dia eo am-baravaran'ny tranontsika sy momba antsika ary arovy izahay amin'ny ratsy rehetra.
Andriamanitro manampy ahy, Jehovah ô, faingana hamonjy ahy.
Miangavy ny fiarovan-tena mahery amin'ny Rà manavotra an'i Kristy, Mpanjakan'izao rehetra izao sy Mpanjakan'ny mpanjaka aho.
Amin'ny anaran'Andriamanitra Ray, amin'ny anaran'Andriamanitra Zanaka ary amin'ny anaran'Andriamanitra Fanahy Masina: miaraka amin'ny herin'ny Ràn'i Jesosy Kristy Tompo, hasiako sy hiaro, hiaro ary hamehy tombo-tena, ny fahatsiarovako, tsy mahatsiaro tena, tsy mahatsiaro tena aho, ny foko, ny fahatsapako, ny fahatsapan-tena, ny toe-batako, ny fisainako, ny fananako ary ny fananako ara-panahy.
Ny zava-drehetra ananako, ny fananako rehetra, ny fananako rehetra, ny zava-drehetra fantatro sy ny tiako rehetra, dia fehezina sy arovana amin'ny herin'ny Ràn'i Jesosy Kristy Tompo. Ry Andriamanitro ô, ampio aho, Jehovah ô, faingàna hamonjy ahy.
Nofeheziko ny lasa, ny ankehitriny sy ny ho avy, nofeheziko ny drafitra, ny tanjoko, ny nofinofiko, ny hazavana, ny zavatra rehetra ataoko, ny zava-drehetra atomboko, ny zavatra rehetra eritreretiko sy ataoko, fehezina tsara ary voaro amin'ny herin'ny Ràn'i Jesosy Kristy. ny Tompo. Ry Andriamanitro ô, ampio aho, Jehovah ô, faingàna hamonjy ahy.
Manisy tombo-kase ny olonao aho, ny fianakaviako, ny fananako, ny tranoko, ny asako, ny raharahako, ny havako, ny taloha sy aorian'izay, fehezina sy arovana ny zava-drehetra, miaraka amin'ny Herin'ny Ràn'i Jesosy Kristy Tompo.
Manafina ny tenako amin'ny ratr'i Jesosy maratra aho, manafina ny tenako ao am-pon'ny tsy mahafaty ao amin'ny Virjiny Maria Bevava aho, hany ka tsy misy na iza na iza afaka hisarika ahy amin'ny faharatsiany, ny teny maloto sy ny asany, amin'ny faniriany ratsy na amin'ny fitaka ataony. mba tsy hisy olona hanisy ratsy ahy eo amin'ny fiainako ara-pihetsiketsehana, eo amin'ny toekariko, amin'ny fahasalamako, miaraka amin'ireo areti-mandoza, miaraka amin'ny fahasosorany, amin'ny masony ratsy, ny fifosana ary fanendrikendrehana, ary koa ny ody, tsitsoka, mantra na hex.
Voaisy tombo-kase ny tenako manontolo, voaisy tombo-kase ny zava-drehetra manodidina ahy, ary izaho ……. Voaro mandrakizay amin'ny Rà Sarobidy indrindra amin'ny Mpanavotra antsika aho.
Amena, amena, amena
Mivavaha amin'ny vavaka ny Ràn'i Kristy isan'andro.
Fomba iray ity izay manampy antsika hitazona ny finoana hatrany ao amin'ny fianakaviana ary mamelona firaisana ara-batana sy ara-panahy amin'ny mpikambana tsirairay.
Azo atao amin'ny maraina izany hanolorana ny andro vaovao alohan'ny fisian'Andriamanitra mahery rehetra. Afaka manao fehezanteny fe-potoana sivy andro ianao na manao vavaka am-bavaka. Ny zava-dehibe dia tsy ny hampitsahatra ny fanaovana azy.
Misy ny taona izay toa mora tapahina ny finoana ary amin'ireo fotoana ireo manomboka manomboka mamoa ny vavaka isan'andro. Ny mangataka hoe amin'ny alàlan'i Kristy, dia ho zava-dehibe sy mahery ny androntsika.
Mino lalandava fa ny herin'i Jesosy Kristy dia manan-kery.